MUDANKIIUUN'KOW UDGOONAW RASUULKII. Q/5aad.Qalinkii: Axmed Cali Kaahin.
Saturday 28th November 2020 09:13:21 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Qalinkii: Axmed Cali Kaahin.
Gunaanadkii Sheekhu Maxamed Jamiil Saynuu Wuxuu ku soo khatimay kitaabkiisa Shamaail Muxamadiya haddii Rasuulkeena Jacelnahay waa in dhaqankiisii ku tilmaanaa gaar ahaan arrimahan soo socda ee uu taxay.
1.Ka dheeraw xumaanta, waa wixii foolxun hadal ama ficil.
2.Haddalkaaga hoos u dhig markaad ku dhawaaqayso gaar ahaan markaad bulsahda la joogto, haddaanad adigu ahayn ka hadlaaya.
3.Xumaanta wanaag kaga jawaab, iskana cafi cida ku xumaysa, una dulqaado, hana ciqaabin, hana goyn.
4.Shaqaalaha ha karhin, hana canaanan, ama saaxiibadaa, ama caruurtaada, ama ardaydaa, ama xaaskaaga, haddii ay hawl ka gaabiyaan.
5.Waajibaadka cidaa masuulka ka tahay ha ka gaabin, sida shaqaalaha hana bakhsin xaqooda ama cid kaleba .
6.Ka dheeraw qosolka badan in yar mooyaane, badanaa qosolkaagu ha ahaado dhoola caddayn.
7.Ka ha habsaamin soo dhawaynta martida, masaajiinta, dumarka, una dhibirsanawn kibirkana ka dheeraw.
8.Qoyska shaqadiisa ku caawi haba ahaato in aad lax listo, ama cunto diyaariso.
9.Xidho dharka inta u fiican ee aad haysato, gaar ahaan wakhtiga Salaada, Ciidaha, iyo Xafladaha.
10.In aad dhulka wax ku cunto ha iska waynayn, iyo wixii lahayo in aad cunto kuna kaaftoonto inyar oo cunto ah.
11.In aad shaqaalaha la shaqayso, haddii ceel la qodaayo, ama ciid la guraayo, taasina waa tilmaan wadda shaqayn iyo dhiiri galin
12.In aanad amaanta badan jeclaan, kuna kaaftoonto sifooyin wanaagsan iyo shaqo wacan oo dheeraada.
13.Ha iska hadlin hadal madhan, iyo hadal xajiin leh, aad kaftantidba
14.Xumaan ha samayn hana odhan haba yaraatee.
15.Walaaladaa midna ha ku qaabilin xumaan, wajigaaguna ha furnaado.
16.Waligaa ogow hadalka tolmoon ee macaan dhibtuna ka dheertaha
17.Ha badsan kaftanka, hana odhan waligaa wax run ah mooyee.
18.U naxariiso dadka iyo noolaha kaleba, si Allaah kuugu naxariisto.
19.Ka dheeraw bakhaylnimada, waana mid la neceb yahay xaga dadka iyo ilaahayba.
20.Hore u seexo, una toos cibaadada iyo dadaalka shaqada.
21.Salaada jamaca dib ha uga dhicin.
22.Ka dheeraw cadha iyo waxa kasoo baxa, haddaad cadhootana shaydaanka iska naar la fogeeyay. Waa dawo e'.
23.Joogtee aamustaanta, hadalkana ha badsan wuu kugu qormayaa.
24.Quraanka akhri si fahama iyo dhuuxid leh, dhagaysana, kuna camal fal.
25.Ha celin Cadarka, badanaana isticmaal, gaar ahaan marka salaada.
26.Caddayga joogtee, gaar ahaan Salaadaha.
27.Ahaw mid geesiya. Runtana sheeg naftaadaba ha ahaatee.
28.Ka maqal nasteexada cid kasta, kana digtoonaw in aad diido.
29.Caddaalad ku dhaq Xaasaskaaga, Caruurtaada dhan kasta.
30.U samir dhibaatada dadka, iskana Saamax, si Allaah kugu dambi dhaafo.
31.Dadka la jeclaw waxaad naftaaa la rabto.
32.Salaanta badi markaad baxayso ama timaado, ama kulantaan iyo meelaha kale gaar ahaan suuqyada. Salaanta Islaamka.
33.Nadiif iyo bilicsamaan ahow, jidh ahaan iyo dhar ahaanba badi.
34.Ciradaada casee kana dheeraw in aad madoobayso.
35.Ku adkaw sunaha iyo kudayashada Rasuulka Salaahu Calayhi Wasalam wuxuu saxaabada u sheegayn in ay iman doonto maalin in diinta lagu faro addaygaa, ajarkeedu u dhigmo, konton saxaabi ajarkooda oo kale. Sunanka ayuu ku jiraa xaddiiskaasi.
36.Allow Nagu arsaaq ku dhaqanka kitaabkaaga iyo sunahaaga, naguna arsaaq jacalka iyo shafaacadiisa Rasuulka Rasuulka Salaahu Calayhi Wasalam. Sidaa waxa inoogu dhmaaday shantii qaybood ee kitaabka Shamaail Muxamadiya ee uu qoray Maxamed Jamiil Saynuu ilaahay miisaanka Camalka fiican ha u saaro. Inagana ha inagu Anfaco. dhamaad
Qalinkii: Axmed Cali Kaahin [email protected]
Cabdikariim Axmed Mooge Oo Shaaciyay Xisbiga Uu Iska Soo Sharixi Doono "' Xisbi Kasta oo aan iska Sharaxo Waxa
"Sh Cali Dheere Ninkii Dilaa 5 Boqol Oo Kun Ayaan Siinayaa" Afhayeenka Alshabaab Oo Madaxiisa Lacag La Dul-dhi
Siyaasi Jiir Cali Madoobe Oo Soo Bandhigay Gef Uu Ka Galay Xisbiga UCID Iyo Arrin Cusub Oo Uu Shaaciyay [ Muuqaal ]
[Xasaasi:-] Siyaasi Cali Warancade Oo Ka Hadlay Wakhtiga Komishanku U Cayimeen Doorashooyinka Somaliland.
Golaha Wakiilada Oo Istiqlaaladii Xildhibaanimo Ka Aqbalay Saleebaan Cawad Cali Bukhaari [ Muuqaal ]
"Waxaan Dhalinyarada Ciyaaraha Kula Dardarmayaa Inay Dalkooda Jeclaadaan, " Cabdikariin Axmed Mooge [ Muuqaal
"Kulmiye Axmed Siillaanyo, Wuxu Igu Yidhi Lambar Ii Garaac, Askarta Madaxtooyadu I Garan Maayaan, Si La Ii Sii Daay
"Somaliland Buuhoodle Ma Xukunto" Siyaasi Cali Cartan Oo Siro Culus Oo Banaanka Keenay [ Muuqaal ]